Afrika Mainty · Jona, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Mainty · Jona, 2019
Tantara mikasika ny Afrika Mainty tamin'ny Jona, 2019
Tsidika bilaogy Kenyanina janoary 2006: fampisaintsainana vitsivitsy
Kenyà 17 Jona 2019
Mitahiry vaovao ara-toekarena sy hirika (opportunités) i Bankelele ary nanamarika fa "Namorona ny tahiriny manokana ny Vondrona Eoropeana mba ahafahan'izy ireo manome fanampiana ho an'i Afrika tsy manontany ny hevitry ny Banky Mondialy, izay tarihin'i mpandala nentindrazana vaovao Etazoniana Paul Wolfowitz".
Nizeria 16 Jona 2019
Kiswahili ny don-tany sy ny kapo-tandroka
Tanzania 14 Jona 2019
(Lahatsoratra tamin'ny janoary 2006) Tsy resy lahatra i Mwandani raha tokony ho faly na tezitra rehefa avy namaky ny tamberina nataon'ny filoha teo aloha tany Tanzania, Benjamin Mkapa, fehim-potoam-piasana dimy taona anankiroa. Nahavita ny fehim-potoana fiasana fanindroany i Mkapa tamin'ny faran'ny taona lasa teo. Jakaya Kikwete, ny mpandimby azy, minisitry ny...
Etiopia 09 Jona 2019
Kenyà 08 Jona 2019
Manana lahatsoratra momba ny firaisana ara-nofo voaaro sy tompon'andraikitra i Ms K, indrindra amin'izao vanim-potoanan'ny fahafahana izao, mandrisika ny olona mba hiaro ny tenan'izy ireo
Tanzania 08 Jona 2019
Mwandani manoratra momba ny manjoan'ireo mpifindra monina Afrikana any Andrefana (amin'ny teny Anglisy sy Kiswahili). Navoakan'i Ethan Zuckerman tamin'ny alalan'ny mpanangom-baovao BlogAfrica ny lahatsorany.
Djibouti 07 Jona 2019
Tanzania 07 Jona 2019
Black Looks manoratra momba ny fivoarana mahaliana ao amin'ny Repoblika Centrafrique izay nandràra ny media tsy handefa na hanoratra mozika sy lahatsoratra manambany vehivavy taorian'ny torolalan'ny minisitry ny fifandraisana ary manantena fa ‘hanao toy izany koa ireo firenena hafa’.